Rejuvenate ziso contour - Homemade masks | Bezzia
Susana godoy | 12/01/2022 12:00 | Runako
Ziso contour ndeimwe yenzvimbo dzakatetepa, nokuti ganda rakatetepa uye saka rinogona kutambura kupfuura mamwe ose echiso. Mukuwedzera, sezvatinoziva, madenderedzwa erima anogonawo kuoneka nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana uye kugara muhupenyu hwedu, zvichiita kuti maziso edu ataridzike. Naizvozvo, isu tinofanirwa kudzika pasi kuti tishande kuti tigadzirise ziso contour nenhevedzano yemasiki.
Sezvo nekuva nezvokudya zvepamba tichave tichipa ganda zvinhu zvose zvarinoda chaizvo. A yakanaka hydration pamwe nekubheja pavhitamini E ndiwo mamwe ematanho anokosha atinofanira kufunga nezvawo. Asi kana iwe uchida kuzviona muchimiro chemasikisi kuti udzorere chiso chako, usapotsa zvese zvinotevera.
1 Zai jena kuti rivandudze ziso
2 Bet pane iyo antioxidant mask
3 Usapotsa avocado!
4 Yoga yogati
Zai jena kuti rivandudze ziso
Kutaura nezve vitamin E, zai jena rine vhitamini iyi saka tiri mumaoko akanaka. Pasina kukanganwa kuti ine boka B, saka inogara ichidzivirira ganda redu. Saka, tinofanira kuishandisa kune nzvimbo inorapwa, iyo munyaya iyi ndiyo ziso reziso. Tinoirega ichizorora kusvika yaoma nokuti izvi zvichatibatsira kusimbisa ganda sezvatinoda. Wobva waibvisa wogeza chiso chako zvakanaka, uchigara uchiisa moisturizing cream. Rangarira kuti iwe unogona kuzviita mazuva ese kuti ugone kuona zvakanakisa mhedzisiro izvo zvichatisiya isu kare.
Bet pane iyo antioxidant mask
Isu tanga tichitaura nezvazvo uye ndezvekuti ganda rinoda iyo dose yemavhitamini, saka, hapana chakaita sekubheja pamasiki anotakura izvo zvese zvekudya zvinotipa iyo inodiwa dose ye antioxidants. Ichokwadi kuti pane zvakawanda, asi munyaya iyi tichazobatanidza karoti mbiri uye tozvisanganisa nemuto weorenji uye maspuniji euchi. Kana isu tine musanganiswa wose zvakanaka homogeneous, inguva yekuiisa paganda uye munzvimbo iyoyo chaiyo kuti udzorere ziso reziso. Iye zvino unongofanira kumirira anenge maminitsi gumi nemashanu wozoibvisa nemvura yakawanda. Chekupedzisira, haugone kukanganwa kuisa yako yaunofarira moisturizer, kuti uenderere mberi nekumisikidza mhedzisiro.
Zvose zvekunaka uye zvezvokudya zvedu zvatinofarira, zvinogara zviripo nekuda kwehuwandu hwezvokudya zvaunazvo. Saka, zvakare, iwe wanga usingade kurasikirwa nemeso ako contour rejuvenation. Panyaya iyi tinoda half ye avocado yaibva zvakanaka. Isu tichaisanganisa neyakarohwa zai yolk uye zvakare akati wandei madonhwe emafuta anogona kuve erosehip mafuta, nekuti anoshandiswa zvakanyanya mumanomano aya. Kana taita musanganiswa zvakanaka, tichaisa kunzvimbo inorapwa, tinomirira maminetsi mashomanana uye tinoibvisa zvakare nemvura. Pasina kupokana, ganda richaunganidza mavhitamini ese uye hydration izvo zvinopa izvi zvinopa.
Zvakare kutaura, tinogona kutaura izvozvo yoghurt chaiyo inobatsira kubvisa wrinkles, kunze kwekupa chiedza chakawanda kune ganda uye kunyange kurwisa acne. Saka ndechimwe chezvinhu zvinogadzirwa nenyeredzi asi nhasi tichazvibatanidza nechipunu chealoe vera. Sezvo hydration iripo zvakare mune iyi ingredient. Pamwe chete vachaita kuti ganda redu rive neutano hwakanaka, rakatsetseka uye rakatsetseka. Saka, iwe unozoishandisa semasiki, iwe unomirira anenge maminetsi makumi maviri neshanu uye wozobvisa nemvura sezvatave kuita mune imwe neimwe yenhanho. Ganda rako richave rakapfava kwazvo, asi kana ukadzokorora chiito ichi kakati pasvondo uye wozorora nematehwe egaka mumaziso ako, iwe uchaona mhedzisiro yacho zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Masks ekugadzirisa ziso reziso